ကီလိုဝပ်- ၎င်းသည် အဘယ်နည်း၊ ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ မူလနှင့် လျှပ်စစ်ပါဝါ | Green Renewables များ
အိမ်ရဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ကျုံ့တဲ့အခါမှာလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။ ကီလိုဝပ်. ၎င်းသည် အသုံးများသော ပါဝါယူနစ် 1000 ဝပ်နှင့် ညီမျှသည်။ တစ်ဖန် watt သည် တစ်စက္ကန့်လျှင် တစ် joule နှင့်ညီမျှသော နိုင်ငံတကာစနစ်အား မြှင့်တင်ပေးသည့် ယူနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန် ဤသည်မှာ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကီလိုဝပ်နှင့် ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများအကြောင်း သိလိုသမျှကို ပြောပြရန် ဤဆောင်းပါးကို အပ်နှံပါမည်။
2 အဖြစ်များသော ကီလိုဝပ်နှင့်ပတ်သက်သော အမှားများ
2.1 Watt နှင့် Watt နာရီ
2.2 Watt-hour နှင့် Watt တစ်နာရီ
3 ပါဝါနှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ကွာခြားချက်
Kilowatt (kw) သည် 1000 watts (w) နှင့် ညီမျှသော အသုံးများသော ပါဝါယူနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။. watt (w) သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစနစ်တွင် ပါဝါယူနစ်ဖြစ်ပြီး တစ်စက္ကန့်လျှင် joule နှင့် ညီမျှသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် watts ကိုဖော်ပြရန်အတွက်လျှပ်စစ်တွင်အသုံးပြုသောယူနစ်ကိုအသုံးပြုပါက၊ 1 volt နှင့် 1 amp (1 volt amp) ဖြစ်နိုင်ခြေကွာခြားချက်မှထုတ်ပေးသော watts သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
ဝပ်နာရီ (Wh) ကို စွမ်းအင်ယူနစ်ဟုလည်း အများအားဖြင့် လူသိများသည်။ ဝပ်နာရီသည် လက်တွေ့ကျသော စွမ်းအင်ယူနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်နာရီအတွင်း ပါဝါတစ်ဝပ်မှ ထုတ်ပေးသော စွမ်းအင်နှင့် ညီမျှသည်။
အဖြစ်များသော ကီလိုဝပ်နှင့်ပတ်သက်သော အမှားများ
ကီလိုဝပ်သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အခြားသော တိုင်းတာမှု ယူနစ်များနှင့် ရောထွေးနေတတ်သည်။
Watt နှင့် Watt နာရီ
ခွန်အားနှင့် စွမ်းအင်တို့သည် ရှုပ်ထွေးလွယ်သည်။ ပါဝါသည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု (သို့မဟုတ်) ထုတ်လုပ်သည့်နှုန်းဟု ဆိုနိုင်သည်။ တစ် ဝပ်သည် တစ်စက္ကန့်လျှင် joule နှင့် ညီမျှသည်။ ဥပမာအားဖြင့် 100 W မီးသီးသည် တစ်နာရီကြာအောင် ပွင့်နေပါက၊ စားသုံးသောစွမ်းအင်မှာ 100 watt-hours (W • h) သို့မဟုတ် 0,1 ကီလိုဝပ်နာရီ (kW • h) သို့မဟုတ် (60 × 60 × 100) 360.000 joules (J)။
၎င်းသည် 40 နာရီကြာ 2,5W မီးသီးတစ်လုံးကို တောက်ပစေရန်အတွက် လိုအပ်သည့် တူညီသောစွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတစ်ရုံ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဝပ်ဖြင့် တိုင်းတာသော်လည်း နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်သည့် စွမ်းအင်ကို ဝပ်နာရီဖြင့် တိုင်းတာသည်။
နောက်ဆုံး ယူနစ်ကို အသုံးနည်းပါတယ်။ အများအားဖြင့် ၎င်းကို ကီလိုဝပ်နာရီ သို့မဟုတ် မီဂါဝပ်နာရီသို့ တိုက်ရိုက်ပြောင်းသည်။ ကီလိုဝပ်နာရီ (kWh) သည် ပါဝါယူနစ်မဟုတ်ပါ။ ကီလိုဝပ်နာရီသည် စွမ်းအင်ယူနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်သက်တမ်းကို အတိုချုံ့ရန် ကီလိုဝပ်နာရီအစား ကီလိုဝပ်ကို အသုံးပြုရသည့် သဘောထားကြောင့် ၎င်းတို့သည် မကြာခဏ စိတ်ရှုပ်ထွေးကြသည်။
Watt-hour နှင့် Watt တစ်နာရီ
ကီလိုဝပ်နာရီအတွင်း ဓာတ်အားကို ရည်ညွှန်းသည့်အခါ မှားယွင်းသော အသုံးအနှုန်းကို အသုံးပြုခြင်းသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ ၎င်းကို ကီလိုဝပ်နာရီ သို့မဟုတ် ကီလိုဝပ်နာရီအဖြစ် ဖတ်ပါက ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်သည်။ ဤစက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားသည် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏ လက္ခဏာများကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်နည်းလမ်းများဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ယူနစ်အမျိုးအစားများဖြစ်သည့် တစ်နာရီလျှင် ဝပ် (W/h) သည် တစ်နာရီလျှင် ပါဝါပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းကို ထင်ဟပ်စေသည်။ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတစ်ခု၏ ဓာတ်အားတိုးနှုန်းကို သတ်မှတ်ရန် တစ်နာရီလျှင် ဝပ်အရေအတွက် (W/h) ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံတစ်ခု သုညမှ 1 မိနစ်သို့ရောက်ရှိ 15 MW သို့ ဓာတ်အားတိုးနှုန်း သို့မဟုတ် အမြန်နှုန်း4MW/hour ရှိပါသည်။
ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ၏ စွမ်းအားသည် အလွန်လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားနေပြီး ၎င်းတို့သည် အမြင့်ဆုံးဝန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေများကို ကိုင်တွယ်ရန်အတွက် အလွန်သင့်လျော်သည်။ ကာလတစ်ခုအတွင်း စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် သုံးစွဲမှုအများစုကို တာဝါဝပ်နာရီသုံးစွဲမှု သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် ဖော်ပြသည်။ အသုံးပြုသည့်ကာလသည် များသောအားဖြင့် ပြက္ခဒိန်နှစ် သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာနှစ်ဖြစ်သည်။ တစ် terawatt • နာရီ တစ်နှစ်အတွင်း အဆက်မပြတ် သုံးစွဲ (သို့မဟုတ်) ထုတ်လုပ်သော စွမ်းအင် ၁၁၄ မဂ္ဂါဝပ်ခန့်နှင့် ညီမျှသည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်၊ တစ်နှစ်အတွင်း သုံးစွဲသည့် စွမ်းအင်သည် ဟန်ချက်ညီပြီး တပ်ဆင်ပါဝါကို ကိုယ်စားပြုကာ ပြောင်းလဲခြင်းကို အစီရင်ခံစာလက်ခံသူအတွက် ပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်နှစ်လျှင် 1 kW ဆက်တိုက်သုံးစွဲမှုသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 8.760 kW • h/ year စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနှင့် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ ညီလာခံများတွင် ဝပ်နှစ်များကို တစ်ခါတစ်ရံ ဆွေးနွေးကြသည်။
ပါဝါနှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ကွာခြားချက်
ရူပဗေဒစာအုပ်များစွာတွင် အလုပ် (အင်္ဂလိပ်စကားလုံးအလုပ်မှ) ကိုညွှန်ပြရန်အတွက် W သင်္ကေတပါရှိသည်။ ဤသင်္ကေတအား ဝပ် (အလုပ်/အချိန်) တွင် ယူနစ်များနှင့် ခွဲခြားထားရပါမည်။ အများအားဖြင့်၊ စာအုပ်များတွင် အလုပ်များကို စာလုံးစောင်းဖြင့် W ဖြင့်ရေးကြသည် သို့မဟုတ် လက်လွတ်ဆွဲခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်။
ပါဝါကို ကီလိုဝပ်ဖြင့် ဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အိမ်သုံးပစ္စည်းများ။ ပါဝါသည် စက်ကိရိယာများလည်ပတ်ရန်အတွက် လိုအပ်သောစွမ်းအင်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤစက်ပစ္စည်းမှ ပံ့ပိုးပေးသည့် စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်မူတည်၍ ၎င်းသည် ပါဝါပို သို့မဟုတ် လျော့နည်းရန် လိုအပ်နိုင်သည်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုပါ။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ကီလိုဝပ်နာရီ (kWh) ဖြင့် တိုင်းတာသည်။ ဤတန်ဖိုးသည် သီးခြားအချိန်တစ်ခုတွင် စက်ပစ္စည်း၏ ပါဝါမည်မျှသုံးစွဲသည်နှင့် ၎င်းသည် ပါဝါသုံးစွဲသည့်အချိန်အပေါ်မူတည်ပါသည်။
ဝပ်အား စကော့တလန် သိပ္ပံပညာရှင် James Watt ၏ အစွဲဖြင့် အမည်ပေးခဲ့သည်။ ရေနွေးငွေ့အင်ဂျင်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် သူ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ တိုင်းတာမှုယူနစ်ကို 1882 ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှအသင်း၏ ဒုတိယကွန်ဂရက်မှ အတည်ပြုခဲ့သည်။ ဤအသိအမှတ်ပြုမှုသည် စီးပွားဖြစ်ရေနှင့် ရေနွေးငွေ့ထုတ်လုပ်ခြင်း၏အစနှင့် တိုက်ဆိုင်ပါသည်။
1960 ခုနှစ်တွင် Eleventh Congress of Weights and Measures သည် ဤတိုင်းတာမှုယူနစ်အား International System of Units (SI) တွင် ပါဝါတိုင်းတာခြင်းယူနစ်အဖြစ် လက်ခံခဲ့သည်။
ပါဝါဆိုသည်မှာ အချိန်ယူနစ်တစ်ခုစီအတွက် ထုတ်လုပ်သော သို့မဟုတ် သုံးစွဲသည့် စွမ်းအင်ပမာဏဖြစ်သည်။ ဤအချိန်ကို စက္ကန့်၊ မိနစ်၊ နာရီ၊ နေ့များဖြင့် တိုင်းတာနိုင်သည်။ နှင့် power ကို joule သို့မဟုတ် watts ဖြင့် တိုင်းတာသည်။
စွမ်းအင်နှင့် ပါဝါအကြား ဆက်စပ်မှုမှာ စွမ်းအင်သုံးစွဲသည့်နှုန်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အချိန်တစ်ယူနစ်တွင် သုံးစွဲသည့် joules တွင် စွမ်းအင်ကို မည်ကဲ့သို့ တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ ဇူလိုင်လတွင် စားသုံးသော တစ်စက္ကန့်လျှင် တစ်ဝပ် (watt)၊ ဒီတော့ ဒါက ပါဝါအတွက် တိုင်းတာတဲ့ ယူနစ်ပါ။. ဝပ်သည် အလွန်သေးငယ်သော ယူနစ်ဖြစ်သောကြောင့် ကီလိုဝပ် (kW) ကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ လျှပ်စစ်မီး၊ စက်ပစ္စည်းစသည်ဖြင့် ကောက်ခံသည့် ဥပဒေကြမ်းကို မြင်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် kW ဖြင့် ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် သင်သည် ကီလိုဝပ်နှင့် ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း » Kilowatt - သင်သိလိုသမျှ